मेरा श्रीमानले नै मेरो प्राइभेट तस्विर खिचेर अरुलाई पठाएर भन्ने गर्थे. – Jagaran Nepal
मेरा श्रीमानले नै मेरो प्राइभेट तस्विर खिचेर अरुलाई पठाएर भन्ने गर्थे.
२०७४ साल बैशाखमा सरिता र अर्घाखाँची पढेनीका दुर्गाको विवाह भएको थियो। सानी आमाले घरमा विवाहको प्रस्ताव ल्याएकी थिइन्। परिवार विवाह गराउने पक्षमा थिएन। तर, सानीमा लगायतको जोडबलमा विवाह भएको सरिता बताउँछिन्। कक्षा ११ मा पढ्दै विवाह भएकोले एक वर्ष माइतमै बसेर उनले कक्षा १२ को अध्यापन सकाइन्। पढाई सकाएर घर अर्घाखाँची गइन्।
श्रीमान वैदेशिक रोजगारका लागि कतारमा बस्ने गरेको विवाह अघि सुनेकी उनले पछि भारतमा केही काम गर्ने गरेको थाहा पाइन्। श्रीमानले सँगै भारत जान दवाव दिन थाले। उनको जाने इच्छा थिएन। श्रीमान श्रीमती सँगै काम गरे भविष्यका लागि रकम जोहो गर्न सक्ने लगायतका कुरा गरेपछि उनी राजी भइन्। दुवै जना भारतको दिल्ली गए। विवाह अघि कुरा चल्दा ‘केटा’ को चालचलन, व्य’वहार सबै राम्रो रहेको भन्ने सुनेकी उनले दिल्ली पुगेपछि श्रीमानको ‘असली अवतार’ देखिन्।
‘दिल्ली पुगेपछि कोठामा ल्यापटप, अनेकन सिमकार्ड, मोबाइलहरू देखेपछि पहिलो दिन नै म अचम्ममा परें’, सरिताले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘विस्तारै श्रीमानको काम बारे थाहा पाएपछि म डराएँ र घर फर्किन चाहँे।’ दुर्गाले दिल्लीमा ‘से’क्स’ र्‍या’के’ट’ को ध’न्दा चलाउने गरेको उनले थाहा पाएकी थिइन्। उनका अनुसार श्रीमान दुर्गाले मोबाइलमा समाजिक सञ्जाल ‘ह्वाट्स एप’ को ग्रुप बनाएका थिए।
जसमा व्यक्तिहरू (ग्राहक) सँग जोडिएका थिए। ग्राहकले ‘स’र्भि’स चा’हियो’ भनेको अवस्थामा उनले अनेकन युवती न’ग्न हुनुका साथै विभिन्न किसिमका तस्विर पठाउने र ‘डिमाण्ड’ अनुसारको ‘क’ल ग’र्ल’ लाई ग्राहक समक्ष पठाउँथे। जसको रकम उनले अनलाइन बैकिङ मार्फत लिन्थे। यसरी दिनमा हजारौँ रुपैयाँ कमाउँथे।
उनले आफुलाई ज’ब’रज’स्ती यसरी केही पटक रकम माग गर्न लगाइएको बताइन्। आफूले चलाएको यौ’न ध’न्दाको बजारमा दुर्गाले सरिताको पनि न’ग्न त’स्वि’रहरू पठाउने गरेका थिए। उनले कम उमेरको युवतीको ‘डि’माण्ड’ भएको अवस्थामा श्रीमानले आफुलाई थाहा नदिई आफ्नो न’ग्न त’स्विर ग्राहकलाई पठाउने गरेको सुनाइन्।भनेको नमाने केही खाना पनि दिन्थेनन्, आफु एक्लै खान्थे, मलाई ५÷१० रुपैयाँको चाउमिन ल्याएर फालिदिन्थे’, आखाँबाट आसुको धारा बगाउँदै उनले पीडा सुनाइन्, ‘असाध्यै भोक लागेपछि त्यही चाउमिन २/३ दिन पछि खान्थें।’
‘घटनाको जानकारी पाएलगत्तै हामीले आवश्यक समन्वय गरेर दयनिय अवस्थामा तत्काल उनलाई उद्दार गरेका थियौँ’, आफन्त नेपालका भारत प्रमुख उद्दार अधिकृत नविन जोशीले भने, ‘उद्दारका लागि कोठामा पुग्दा अवस्था सामान्य थिएन, करेन्ट लगाइएकोले उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक थियो।उनले थपे, ‘क्रुर यातना दिइएकाले उनी बोल्न सकेकी थिइनन्। शरीर कामीरहेको थियो। आखाँबाट निरन्तर आँसु बगिरहेका थिए। एकमद कमजोर भएकी थिइन्। अवस्था नाजुक भएकाले उपचारका लागि उनलाई तत्काल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।’
‘मेरा लागि नविन दाइ र लक्ष्मी दिदी (उद्दारकर्ता) भगवानको रूपमा त्यहाँ आउनुभयो’, उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरू नआएको भए म बाँच्ने थिइन होला।उद्दारपछि अहिले उनी आफ्नो घर तिलोत्तमा फर्किएकी छिन्। तर, पी’डा बिर्सिन सकेकी छैनन्। ‘विक्षिप्त भएकी सरितालाई अहिले घटना बिर्साएर उत्प्रेरित गर्न निकै जरुरी छ’, आफन्त नेपाल संस्थाको भैरहवा शाखाकी प्रमुख मेनुका गिरीले भनिन्, ‘हामीले सकेसम्म प्रयास गरिरहेका छौँ।’